Indonezia: Manohitra ny fifohana sigara, ny yoga ary ny famatorana ny fantson-dranonaina ny Fatwa…. · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Janoary 2021 5:29 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Italiano, srpski, English
(Lahatsoratra tamin'ny volana Janoary 2009)
Namoaka Fatwa manohitra ireto manaraka ireto ny herinandro lasa teo ny Filankevitry ny Ulema Indoneziana (MUI), fahefana Islamika ambony indrindra ao amin'ny firenena:
1. Fandrarana ny yoga izay misy singa Haindò.
2. Fandrarana ny fandavana ny fifidianana raha misy ny kandidà “voafantina”.
3. Fandrarana ny fifohana sigara ataon'ny ankizy sy ny vehivavy bevohoka eny amin'ny toeran'ny daholobe.
4. Fandrarana ny fanalan-jaza raha tsy hoe iharan'ny fanolanana ny reny na mampidi-doza azy ny fitondrana vohoka, na latsaky ny 5 herinandro ny zaza ao am-bohoka.
5. Fandrarana fanapahana ny fantson-dranonaina satria “tsy azo averina” amin'ny laoniny intsony izany.
6. Fandrarana ny fanambadiana amin'ireo zaza tsy ampy taona, araka ny lalàna tamin'ny taona 1974 izay mandrara ny lehilahy latsaky ny 19 taona sy ny vehivavy latsaky ny 16 taona tsy hanambady.
Nahasarika ny sain'ny olona maro manerantany ny didy mikasika ny yoga. Herinandro vitsivitsy lasa izay, nandrara ireo mantras mifandraika amin'ny yoga ihany koa i Malezia. Miady hevitra momba ny fatwa ao anaty fifanakalozan-kevitra an-tserasera ny Indoneziana. Araka ny efa nampoizina, nitsikera ny fandraràna ny yoga ireo mpampianatra yoga:
“Amiko, zavatra tsy azo fehezin'ny mpitondra fivavahana ny yoga. Anjaran'ny tsirairay ny fomba fampiharana izany, ”hoy i Pujiastuti Sindhu, Miozolomana sady tompon'ny Sekolin'ny Yoga any Bandung, atsimon'ny renivohitra Jakarta.
“Matahotra ny mpitondra fivavahana fa manompo andriamani-kafa ny olona mampiasa yoga kanefa tsy izany no izy. Satria tsy azon'izy ireo hoe inona ilay yoga ary tsapan'izy ireo fa fandrahonana izany. Tokony handeha any amin'ny fampianarana yoga izy ireo ary hanandrana izany. ”
Ireto misy fanehoan-kevitra vitsivitsy momba ny Fatwa tao amin'ny Twitter:
astrid_amalia: Raha fahotana ny yoga dia avelao aho hiaina amin'ny fahotako. Nanokatra ny masoko momba an'Andriamanitra ny Yoga, ka aiza ny fahotana amin'izany ?
ifahmi: Namaky ilay Fatwa aho. Ary ho ahy, adala daholo izy ireo, satria tsy misy hidirany izany. Ny fifohana sigara, ny Yoga, fanapahana na famatorana ny fantson-dranonaina, ny fifidianana.
kapkap: Tena mahamenatra be. Raha miezaka ny handresy ny krizy manerantany ny olona, ​​miresaka momba ny yoga toy ny ratsy kosa eto ny MUI
LeonnieFM: Namaky sioka maro momba ny MUI aho androany alina nilaza fa mandrara ny yoga izy ireo? Hoy aho hoe mandrara ny tenany izy ireo noho izy ireo mpihatsaravelatsihy
Mampahatsiahy ny Filankevitry ny Ullema ny Everything Indonesia fa misy olana hafa manan-danja kokoa noho ny yoga:
Tsy manana lonilony manokana amin'ny Filankevitry ny Ulema aho izay nandrara ny yoga ho an'ny Indoneziana Miozolomana tato ho ato. Saingy tsy manana zavatra hafa tsara kokoa hatao ve izy ireo, toy izay mitety ny sekoly fanaovana fanatanjahan-tena ao amin'ny firenena ary avy eo manohitra ny fihirana Haindò?
Notsikerain'ny Nahdlatul Ulama, fikambanana Islamika lehibe indrindra any Indonezia ihany koa ny fatwa:
Nilaza ny Nahdlatul Ulama, fikambanana Islamika lehibe indrindra any Indonezia, fa “tafahoatra” ireo didy.
Nilaza ny filoha lefitry ny fikambanana Masdar F. Mas'udi fa tsy tokony nanafangaro ny fivavahana tamin'ireo raharaha telo ireo ny MUI.
Fialamboly ny yoga, toy ny fampiharana azy any Indonezia, hoy izy, ary tsy tokony heverina ho fanompoam-pivavahana.
Mba hanakiviana ny olona tsy hifoka sigara, hoy ihany izy, dia tsy tokony hampiasa ny “lalàna Islamika” ho fitaovana ny MUI.
Nilaza ihany koa izy fa tsy tokony “hampiditra an'Andriamanitra sy handrahona ny olona amin'ny afobe” ny MUI raha te handrisika ny Miozolomana hifidy.
Mihevitra i My Busy Brain fa tsy misy fampianarana mandrara ny fandavana ny fifidianana:
“Mikasika ny fandavana mifidy, tsy mahita izany mihitsy amin'ny fampianarana Islamo aho ka voasoratra mazava ao amin'ny Coran fa haram (fahotana) ny tsy fifidianana. Ny mifidy ny mpitondra tsara (miaraka amin'ny famaritana rehetra ny amin'ny tokony ho mpitondra tsara) no ampianarin'ny Islamo. Mampianatra momba ny safidy ihany koa ny Islamo. Mampianatra momba ny fahalalahana izy. ”
Nilaza i Multibrand fa tsy azo ampiharina araka ny lalàna ny fatwa:
“Hoy aho hoe raha araka ny rafitra ara-dalàna misy eto antsika, dia tsy anisan'ny lalàna miabo ho antsika ny Fatwa avy amin'ny MUI. Noho izany, tsy azo ampiharina ho ara-dalàna. Na izany aza, koa satria ny MUI no heverina fa fahefana ara-pinoana Miozolomana ambony indrindra, dia azo antoka ilay Fatwa fa hisy fiatraikany ara-maoraly indrindra amin'ireo olona monina any amin'ny faritra ambanivohitra.”
Diso fanantenana ireo mpifoka sigara tamin'ny fatwa nanohitra ny fifohana sigara:
“Tezitra amin'ny fatwa aho, satria mpifoka sigara daholo ny raiko sy ny raibeko ary mahatonga azy ireo ho mpanota izao fatwa vaovao izao”, hoy i Abdul Hardiyanto, 38 taona, mpanera Miozolomana.
“Mbola hifoka sigara foana aho, satria tsy tokony hiditra amin'izany ny fivavahana. Manana ny lalànam-panjakana momba izany, “hoy i Wisena, 33 taona, Miozolomana mpivarotra trondro.
Nalaina tao amin'ny My Yoga Online ny sary eo amin'ny pejy fandraisana.